News18 Nepal || हरिस रउफ सहित तीन क्रिकेटरलाई कोरोना पुष्टि - News18 Nepal
हरिस रउफ सहित तीन क्रिकेटरलाई कोरोना पुष्टि
एजेन्सी । पाकिस्तान क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर हरिस रउफ सहित तीन क्रिकेटरलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सोमबार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले इंग्ल्यान्ड भ्रमण तयारीमा रहेका रउफ सहित युवा स्पिनर सादब खान र ओपनर ब्याट्सम्यान हैदर अलीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएको छ ।
पाकिस्तानले आइतबार खेलाडीमा परिक्षण गरेको थियो । योसँगै पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमण देखिने क्रिकेट खेलाडीको संख्या पाँच पुगेको छ । यसअघि पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । पूर्व ब्याट्सम्यान तउफिक उमरले भने कोरोनाविरुद्धको लडाईं जितिसकेका छन् ।
पाकिस्तान यसै साता तीन टेष्ट र तीन टि २० आई सिरिजको लागि इंग्ल्यान्ड भम्रणमा जाने तयारीमा रहेको छ । अगष्ट र सेप्टेम्बरमा सिरिज खेल्ने कार्यक्रम छ । जसको लागि केहि साता अघि पाकिस्तानले २९ सदस्य टोली घोषणा गरेको थियो । तीन युवा खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएसँगै इंग्ल्यान्ड जान लागेको पाकिस्तानलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
१९ वर्षिय हैदर युवा ओपनर ब्याट्सम्यान हुन् । घरेलु र उमेर समुहमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै पहिलो पटक पाकिस्तानको सिनियर टोलीमा परेका थिए । यता रउफ अष्ट्रेलियाको चर्चित बिग ब्यास लिगमा गत सिजनमा मेलबर्न स्टार्सबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै जनवरीमा बंगलादेशविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेसँगै मेलबर्न स्टार्सबाट खेल्दै रउफले १० खेलमा २० विकेट लिएपछि पाकिस्तानको टोलीमा मौका पाएका थिए । रउफले पाकिस्तानबाट २ टि २० आई खेलेका छन् । २१ वर्षिय अलराउन्डर सादब खान पाकिस्तानका प्रमुख सदस्य हुन् । उनले ५ टेष्ट, ४३ ओडिआई र ४० टि२० आई खेलेका छन् ।
शनिबार बंगलादेशका पूर्वकप्तान मशराफे विन मोर्तजा सहित बायाँ हाते स्पिनर नाजमुल इस्लाम र पुर्व ओपनर ब्याट्सम्यान नसीफ इकवालमा पनि कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो ।
मेस्सी सात सय गोल क्लबमा प्रवेश, अरु को को छन् ?
को हुन् ‘मेक्सिकन मेस्सी’ जसले ला लिगामा बनाए कीर्तिमान ?
चर्चित खेलाडी अन्डरटेकरले रेस्लिङबाट लिए सन्यास
बंगलादेशका पूर्वकप्तानसहित तीन जना क्रिकेटरलाई कोरोना पुष्टि
गांगुलीको परिवारका चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२०११ को क्रिकेट विश्वकपको फाइनल बारे खुल्यो ठूलो रहस्य